मार्केटिंगको विशाल टेक्नोलोजी समस्या समाधान गर्न तीन कुञ्जी | Martech Zone
सबै धेरै अक्सर, प्रविधि सफलताको आकृति हुन्छ। म पनि यसको दोषी छु। टेक खरीद गर्न सजिलो छ र यसैले, तुरुन्त अपग्रेड जस्तै महसुस गर्दछ! २००० को दशकको पहिलो दशक भनेको आन्तरिक बारेमा थियो, त्यसैले हामी खुला हातले मार्केटि auto अटोमेसन तिर गयौं, खरीद आदेश र निश्चित मार्गनिर्देशनहरूको धुलोमा - हामी बाहिर थियौं र हाम्रो नयाँ फाउन्डम प्लेटफर्मको साथ दौडिरहेका थियौं। यो रणनीतिमा आउँदा हामीले अन्धालाई थप्पड लगायौं किनभने रणनीति ढिलो देखिन्छ; यो सेक्सी थिएन।
मार्केटिंगले आवश्यक पर्ने कुनै पनि हिसाबले राजस्व तालिकामा एउटा सीट लिन गइरहेको थियो - यो एक लडाईको पुकार थियो। तर जब वर्ष बित्यो र आरओआई उपायहरू जुन प्रतिबद्ध गरिएको थियो त्यो कहिले आएन, ती कराई वास्तविक आँसुमा परिणत भए। मार्टेकको लागि रुनु यो सजिलो छ जब तपाईले उत्पन्न गर्नुभएको फिर्तीलाई हेर्नुहुन्छ - एक प्रतिशत भन्दा कम सबै मार्केटि leads लेडहरूको हाल ग्राहकमा रूपान्तरण गर्दछ। त्यो आश्चर्यजनक असफलता हो। र यदि हामी यस लक्षणको मूल कारणको लागि समाधान गर्दैनौं भने, मार्केटिंग पेशा निर्मूल हुने खतरामा छ, यो लगभग सुरु हुनुभन्दा पहिले।
यो आलोचनात्मक छ कि हामीले यस समस्यालाई मूल कारणमा हमला गर्छौं, साथै राम्रोसँग फन्ड भएका टेक विक्रेताहरूले दोषलाई यस्तो चीजमा बदल्नको लागि झुकाव राख्छन् जसले अधिक सफ्टवेयरको खरीदलाई सक्षम बनाउँछ, जस्तै ग्राहकहरूको व्यवहारमा परिवर्तन। केवल सही परिवर्तन हुन आवश्यक छ कि मार्केटिंगको दृष्टिकोण हो। मार्केटिंगमा सफल हुन, र वास्तवमै व्यापारमा सफल हुनको लागि तपाईंले ती तीन कम्पोनेन्टहरूलाई समान र जानबूझी सोच दिन सक्नुहुनेछ: त्यो तपाईंको रणनीति, तपाईंको टेक, र तपाईंको कार्यनीति। र ती सबै बोर्डमा पigned्क्तिबद्ध हुन आवश्यक छ।
त्यसोभए त्यो कस्तो देखिन्छ? तपाईं सोध्नुभयो खुशी छ। यहाँ छ मेरो लिनुहोस्।
रणनीति: पहिलो डोमिनो
तपाईंको काम शीर्षक फरक पर्दैन, तपाईं आफ्नो संगठन को व्यापक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ। सामान्य सर्तहरूमा, व्यवसायको अन्तिम लक्ष्यहरू के हुन्? बजारहरू, विक्रेताहरू, ग्राहक सेवा मान्छेहरू ... तपाईंको टोलीमा सबैलाई यस आलोचनात्मक प्रश्नको उत्तर जान्नुपर्दछ। यो पहिलो चीज हो जुन सबैलाई थाहा हुन्छ, बुझ्छ र ख्याल गर्छ। यदि यो स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन भने, सोध्नुहोस्: हामी के हासिल गर्न कोशिस गर्दैछौं? हाम्रो प्रमुख विकास लीवरहरू के हुन्? तार्किक रूपमा, अर्को चरणमा बुझ्नु समावेश छ कि तपाईंले दैनिक के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो वृद्धि रणनीति प्राप्त गर्न मद्दत गर्न। संक्षेप मा, परिवर्तन तपाईको व्यवसायमा हेर्न चाहानुहुन्छ।
यसले दुई उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ:
यो कुराको लागि सुनिश्चित गर्नको लागि कि तपाईंले आफ्नो समयको लागि महत्वपूर्ण कुराको लागि काम गरिरहनु भएको छ।
केहि नगर्ने कार्य रोक्न। यो सरल सुनिन्छ, तर तपाईं रणनीति र कार्यनीति बीच मौलिक विच्छेदन को कारण धेरै व्यवसाय मा अवस्थित आवाज को मात्रा मा छक्क हुनेछ। एक पटक तपाईं रणनीति को स्थान बाट पहिलो अपरेटिंग शुरू गर्नुभयो तपाईं नाटकीय बदलाव देख्नुहुनेछ। मार्केटिंगको सट्टा एक-अफ गतिविधि बारे उत्साहित हुँदै, जस्तै घटना होस्टिंग, र त्यसपछि यसमा कुनै स्पष्ट उद्देश्य बिना दौडँदै ... तपाईं पज गर्नुहोस्। तपाईले सोध्नुहुनेछ: हामी के खोज्दैछौं? हामी कसलाई संलग्न हुन खोज्दैछौं? किन अर्को कार्यक्रमको सट्टामा यो घटना?
हामी प्रायः B2B व्यवसायहरूका बारे ग्राहक सेवा जीवन शैली मूल्य रणनीति अपनाउने बारेमा सुन्छौं, जसमा उनीहरूले नयाँ प्राप्तिको एवम्मा विद्यमान ग्राहकहरूबाट राजस्व र प्रतिबद्धता बढाउने लक्ष्य राख्छन्। तिनीहरूको सम्पूर्ण संगठनको कपडाको धागो तब सबै नकारात्मक मंथनलाई असर गर्ने बारेमा हुनुपर्दछ। जब तपाईं आफ्नो रणनीति सेट गर्नुहुन्छ, र त्यसपछि सुरुबाट एक समान रोडमैप सेट गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो उच्च लक्ष्यहरू पनि चाँडै तपाईं अन्यथा भन्दा चाँडो धेरै छिटो एक नर्क बाहिर दस्तक गर्न थाल्नुहुनेछ।
प्रक्रिया: सॉसेज कसरी हुन्छ
रणनीति कार्यान्वयन पछि, र कार्यान्वयन को लागी दिशानिर्देशक प्रकाश एक राम्रो सोच विचार प्रक्रिया हो। यदि तपाईंको रणनीति ग्राहकको जीवनकालिन मूल्यको बारेमा हो भने जस्तो मैले माथि प्रयोग गरेको उदाहरणमा तपाईं लेजर-फोकस गरिएको हुन सक्छ, एक मजबूत, दोहोरिने योग्य ग्राहक सक्षमता र खाता विकास प्रक्रियामा। परिपक्वता को सबै बिभिन्न चरणहरु मा तपाईको अवस्थित ग्राहकहरु लाई कसरी मार्केट गर्ने भन्ने बारे तपाई तल ड्रिल गर्नुहुनेछ, र तपाईले तिनीहरुका लागि दिमागमा राख्नु भएको यात्राको माध्यमबाट कसरी भण्डार गर्न सक्नुहुन्छ नक्शा बनाउनुहुनेछ।
उदाहरण को लागी, कसैले तपाईंको समाधान खरीद गरे पछि - के हो? यहाँ छ जहाँ तपाइँ आफ्नो ग्राहक यात्रा को प्रत्येक रg्ग कस्तो देखिन्छ आंकडा। मानौं एउटा ग्राहकले उत्पादन X खरिद गर्दछ र अर्को चरणले यसको साथ कसरी सफल हुने भनेर प्रशिक्षण प्रदान गर्दैछ। त्यस पछि ग्राहकलाई किन उनीहरूलाई उत्पादन वाई चाहिन्छ, र उनीहरूलाई खरीद र कार्यान्वयनको लागि तयार गर्न सिकाउँदै आउँदछ। जब तपाईं एक स्पष्ट प्रक्रिया नक्शा गर्नुहुन्छ र तपाईंको टीमलाई यसको वरिपरि पign्क्तिबद्ध गर्नुहुन्छ, र यो तपाईंको बढि रणनीति द्वारा संचालित हुन्छ, तपाईंको ग्राहकले तपाईंको मान राम्रोसँग पहिचान गर्दछ। यो इरादा र एक रणनीति लिन्छ दृढ प्रतिबद्धता तपाईंको रणनीति अगाडि राख्न।
र अन्तमा - तपाइँको टेक स्ट्याक (मलाई थाहा छ, तपाइँ आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामी यस भागमा पुग्नेछौं)। पहिले, याद गर्नुहोस् कि तपाईंको टेक्नोलोजी यस लाइन-अपमा तेस्रो आएको छ। यो अझै पनि सपना टीमको हिस्सा हो, तर यो शुरुवात गर्ने खेलाडी होईन। दोस्रो, यो खेल्नु पर्ने भागका लागि यसलाई चिन्नुहोस् - क समर्थन भूमिका। जिल राउली, मार्केटोको प्रमुख विकास अधिकारीले प्रसिद्ध रूपमा म्यूज गरे कि:
उपकरणको साथ मूर्ख अझै पनि एक मूर्ख हो।
म यसलाई एक कदम अगाडी जान्छु र तर्क गर्छु कि वास्तविकता अझ गम्भीर छ, किनकि त्यो व्यक्ति अब एक हो खतरनाक मूर्ख
रणनीतिबाट विच्छेदन गरिएको खराब प्रक्रिया, विफलताको लागि निश्चित विधि हो जब तपाईं मापन र टेक्नोलोजीमा थप्नुहुन्छ। तपाईं अगाडि ट्रयाकबाट छुट्नुहुनेछ, छिटो - र तपाईं आफ्नो ब्रान्डलाई क्षतिग्रस्त गर्नुहुन्छ। तपाईंको रणनीति र कार्यविधि कसरी सफल छन् भन्ने तपाईंको मापन तपाईंको टेक स्ट्याकले सुदृढीकरण गर्नुपर्छ। तपाईंको प्रणालीहरूले तपाईंको डाटा क्याप्चर गर्नुपर्दछ, त्यसैले तपाईं यसलाई विश्लेषण गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि बुद्धिमान्‌ निर्णयहरू लिनुहुनेछ कि तपाईं कोर्समा नै बस्नुहुनेछ वा कोर्स-सहीको बारेमा।
यो काम गर्नको लागि, मार्केटिंगलाई अन्य ग्राहक डाटा प्लेटफर्महरूमा स्पष्ट रेखाको आवश्यक पर्दछ। प्रत्येक विभागको लागि मात्र यसको प्रविधि प्रयोग गर्न पर्याप्त छैन; यो पनि एक तरीकाले आर्किटेक्ट हुनुपर्दछ ताकि डाटालाई अर्थपूर्ण तरीकाले विभागहरूको बिच पार गर्न सकिन्छ। जब तपाइँ तपाइँको रणनीतिक दिशा र विधिसँग सुदृढीकरण गर्न तपाइँको प्रणालीहरू आर्किटेक्ट गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसको उद्देश्य अधिकतम पार्नुहुन्छ। यो टेक्नोलोजीलाई तारा बनाउने जत्तिकै चम्किलो नहुन सक्छ, तर यसले तपाईंलाई अधिक काम गर्न र परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
धेरै संस्था अन्जानमा यी तीन घटक मध्ये एकमा केन्द्रित हुन्छन् र अन्य दुईलाई कालोमा छोडिदिन्छन्। वा, अझै नराम्रो, ती सबै ह्यान्डल गर्न प्रयास गर्छन् - तर साइलोसमा। जब कि त दृश्य लिन्छ, तपाइँको टीम सफलता को लागी सेट अप छैन। यसको सट्टामा, तपाईले आफ्नो आयलाई तिव्रता दिन सक्नुहुन्छ रणनीति पहिले, त्यसपछि प्रक्रिया र प्रविधि द्वारा - त्यस क्रममा र समान समूहको तीन भागको रूपमा। यो मिठो ठाउँ हो, र जहाँ तपाईं वास्तवमै सफलता लिने आकार पाउनुहुनेछ - र द्रुतगति।
टैग: जिल रोलीमार्केटिंग कार्यान्वयनबजार प्रक्रियामार्केटिङ रणनीतिबजार टेक्नोलोजीमार्केटोमार्टेकमार्टेक स्ट्याकप्रविधि